Ogaden News Agency (ONA) – Shir-hawleedkii jaaliyada magaalada Edmonton oo lagu soo dhaweeyay Dr. Xoriyo guulna ku dhamaaday
Shir-hawleedkii jaaliyada magaalada Edmonton oo lagu soo dhaweeyay Dr. Xoriyo guulna ku dhamaaday
Posted by ONA Admin	/ April 23, 2013
Hawlwadeenada jaaliyada magaaladaEdmontonayaa waxay isugu yimaadeen shir aad muhiim u ah oo ay kaga arin sanayeen geedi socodka halganka hubaysan ee ay JWXO hormoodka ka tahay, kaasoo ahaa shirkii bilaha ahaa ee jaaliyada.
Waxaa shirka lagu furay aayadaha quraanka kariimka ah oo uu akhriyay gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton halgame Ismaaciil C/laahi ilaahay haka ajirsiiyee.
Gudoomiyaha ayaa wuxuu ka warbixiyey jaaliyada hawlihii u qabsoomay iyo shaqada hada hortaala ee loo baahan yahay in la dhamaystiro, taasoo uu ku tilmaamay in qofkasta oo xubin ahi xil iska saaro in uu waajibkiisa guto.
Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyey hadalkii isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yuusuf Ismaaciil oo cadeeyey maanta in ay jaaliyadaha Canada marayaan meeshii ugu saraysay dhinaca abaabulka, arimah ururka dhalinyarada, haweenka iyo kor u qaadida wacyiga shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ee ku dhaqan dalka Canada.
Madaxa Hogaanka arimaha ururka iyo dabagalka/waxbarashada ee jaaliyadaha Canada halgame Maxamed Aadan[abshir] ayaa wuxuu aad uga hadlay xubinka waxa looga baahanyahay iyo sidii kor loogu qaadi lahaa u bislaanshaha hawlaha halganka looguna furi lahaa siminaaro, tababaro kor loogu qaadayo barashada halganka iyo sidii loo gaadhsiin lahaa wadamadan aynu ku dhex noolnahay qadiydeena iyo tacadiyada uu ku hayo gumaysigu shacbigeena .
Waxaa madasha shirka si weyn loogu soo dhaweeyey xubin sare oo ka tirsan JWXO DR Xoriyo oo in mudo ah ku maqnayd hawl shaqo oo jaaliyada ay aad u sugaysay, waxayna ka warbixisay socdaalkeedii shaqo meelihii ay soo martay iyo waxyaabihii ay kala soo kulanatay. Waxay aad ugu dheeratay halganku meesha uu marayo iyo guulaha is daba jooga ah ee Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogaadeeniya ay maalin walba soo hoyinayaan taas oo dhabar jab ku noqotay iyo mooraal xumo ciidanka gumaysiga Wayaanaha iyo kuwa dhidid dhawrka ah ee xabada laysaga dhigayo, kuna kaliftay in ay maalin walba isu soo dhiibaan naftood hurayaasha Jiida hore amase ay u baxsadaan dawladaha dariska ah.
Waxay sidoo kale bogaadin u soo jeedisay jaaliyadaha ka hawlgala aduunka oo dhan ee fashiliyey tabihii uu cadowgu adeegasanayey ee uu ku magacabay qurba joogta iyadoo kuwa badan oo ku soo hungoobay soona taabtay Jigjiga waxa dhabta ah ee ka jira ay maanta halganka taageero u yihiin. Waxay aad ugu hambalyeysay jaaliyada magaaladaEdmontonsida ay goor walba ugu hawlanyihiin halganka dardargalintiisa iyo sida wanaagsan ee wada tashiga ah ee ay u qaybsanayaan shaqada isuna abaabulayaan waxayna kula dardaarantay in ay sii labolaabaan dadaalkooda ilaaliyaana midnimada, isku duubnaanta shacabka iyo jaaliyada.
Intaa kadib waxay xubnuhu waydiiyeen DR Xoriyo su’aalo ku saabsan halganka oo ay markaa doonayeen in loo iftiimiyo waxayna uga jawaabtay si waafi ah oo ay ku qanceen hawlwadeenadu iyadoo ku soo gabagabaysey mowqifka JWXO wuu cadyahay taas oo ah in ay u halgamayso Aayo ka Tashiga iyo mustaqbalka shacbi weynaha Ogaadeeniya ee ku hoos jira gumaysiga Itobiya, wax xornimo ka yar aanay diyaar u ahayn.
Shirkii wuxuu ku soo dhamaaday jawi farxadeed wuxuuna u dhacay si heer sare ah oo ay ka muuqatay ururnimo.